Indlu kaS. Braz
Indlu yelizwe enechibi, igadi kunye negadi engasemva enemithi yeziqhamo eyahlukeneyo (1,500m2)
Ibekwe kwindawo entle kunye nembali yasemaphandleni yaseMinho kwaye ikufuphi kakhulu nezixeko eziphambili ezisemantla njengePorto, Braga, Guimarães. Iilwandle zikude ngemizuzu engama-30.
Ukuba uyayithanda indalo kwaye wonwabele ukuzola kwelali, yiza uchithe iintsuku ezimbalwa kwindlu kaS.Braz.
ICasa de S.Brás ibekwe kufutshane neChapel yakudala yaseS. Brás kunye neemitha ezingama-60 ukusuka kwiMonastery yaseLandim, eyindlu yeemonki yaseRoma esusela kwinkulungwane ye-12. Yindlu yamatye e-rustic, ejikelezwe yindalo, enamagumbi okulala ama-2, igumbi lokuhlambela eli-1, ikhitshi eli-1 kwaye ibekwe kwisiza somhlaba esinommandla omalunga ne-1,500 m2.
Ngaphandle kokuba yindlu endala, ixhotyiswe ngokufanelekileyo kunye nayo yonke induduzo. Igumbi lokulala eliphindwe kabini linefestile evula i-terrace yangaphandle, entle kakhulu. Ngaphandle, kukho izinto zakudala zasezilalini kunye netanki, apho iwayini yeCasa de S. Brás yanyathelwa phantsi kwaye ngoku isetyenziswa njengedama lokuqubha (17m2) ngeentsuku zasehlotyeni.
Inekhitshi elihlala eludongeni, elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nesitovu samatye, elineenkuni, apho bekubhakwa khona isonka. Ichasana negumbi lokuhlambela elineshawa kwaye, phantsi kwezinyuko, kwicala lasekunene, kukho enye ishawari elapha phambi kwegadi, eyona ibalaseleyo ekuhlambeni ngeentsuku ezishushu.
Yindawo emnandi kakhulu kwaye iyingqayizivele, xa imozulu ilungile, njengoko kunokwenzeka ukuba ujabulele iindawo ezininzi eziluhlaza ezijikeleze indlu.
Singasifumana isilo-qabane sakho
Indawo ejikelezileyo ineendawo zokutyela eziqhelekileyo (kufutshane kakhulu), iikhefi,
i-confectionery / i-bakery, i-mini-market, i-butcher, i-hairdresser, ikhemesti kunye nebhanki / i-ATM. Kukho ivenkile enkulu emalunga ne-1km kude.
ILandim yindawo ecwangcisiweyo kwabo bafuna ukufumana izixeko ezintle kunye nemimandla esemantla ePortugal: Guimarães, Braga, Viana do Castelo, Porto, Parque Peneda-Gerês, njl. Siyimizuzu engama-25 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseFrancisco Sá Carneiro.
Sifuna ukuba uzive usekhaya kwaye, ke, sinethemba lokuba ukuhlala kwakho apha kuya kukhumbuleka kwaye ungasebenzisa onke amathuba okufumana le ndawo!
Ndikonwabela kakhulu ukudibana nabantu abavela kwiindawo ezahlukeneyo kunye nokwamkela abantu, ngoko ke ngokwemvelo ndiya kwenza konke okusemandleni am ukwenza iindwendwe zam zizive ngcono kwaye ziphile amaxesha angenakulibaleka.